Shiva Shanti mbeu | MyWeedSeeds.com
Shiva Shanti mhodzi
Kureba: kusvika 39.5in | 100cm
THC nhanho: yepakati 6% kusvika 12%
CBD nhanho: med / yakaderera 0.8% kusvika 1.8%
Shiva Shanti mbanje inotangira kuIndia uye inonzi "Shiva," uyo anowanzove mumwe wevamwari vakuru vechiHindu. Shiva inosanganisirwa neshanduko, inove yakakwana kune ino inoshamisa simiti. Shiva Shanti anotanga mwaka wake wekukura semuti mupfupi une huswa, uye nekukurumidza unoshanduka kuita runako rwakakura zvakakwana rwakaremerwa nematanda mabukira uye THC makristasi. Iwe unozokoshesa yake yakakwira bud-kune-mashizha chiyero. Anogadzira goho rakanaka kwazvo remhando yepamusoro. Shiva Shanti mbanje chirimwa chakanakira mishonga. Iye ari nyore kubata uye anoda hunyanzvi hwekukura hushoma. Tinomukurudzira kune novice vagadheni vemukati vanozomuwana achiregerera uye achipikisa. Shiva Shanti hwema hwacho hwakasarudzika uye hunonhuwirira, hwema hunopisa hwechokwadi kune yake yekumabvazuva genetics. Kunaka kwake zvakare kune zvekunze, asi zvakapfava uye zvakatsetseka, uye kukwirira kwake inzvimbo inonakidza inosanganisira buzz yemuviri. Vanhu vanorima mbanje kurapa matambudziko ekurapwa vanomuwana iye sarudzo yakanaka kwazvo.